Soosaaraha Jumlada ee Eco Friendly oem Customish squishy toy toy anti-stress PU Foam ball Manufacturer and Supplier | Meibaoli
Soo saaraha Eco Friendly oem caag caruurtu ku ciyaarto oo ka hortag ah cadaadiska kubada PU Foam
Kubbadda walbahaarku waxay dhaqaajisaa kanaalka dareenka ee maskaxdaada (maxaa yeelay waxaad dareemeysaa muruqyadaadu inay murugoobaan oo ay nastaan ​​intaad tuujinaysid), taas oo kaa qaadeysa tamar kasta oo xad-dhaaf ah oo loo adeegsado kanaalkaaga aqoonta.
Magaca Product: Kubad caado u ah Custom PU foam
Cabir: 2.3cm, 6.3cm, 7cm, 15cm, 20cm ama cabir ahaan loo habeeyay
Isticmaal: Kubadda ka hortagga buufiska ee yareynta buufiska
Kubadda taxanaha ah ee muujinta
Waxay sii deysaa xiisad muruq ah
Kubadaha cadaadisku waxay ka caawiyaan muruqyadaada inay dabcaan oo ay sii daayaan buufiska, kacsanaanta, walaaca, iyo tamar taban. Adiga oo ka yareeya culeyska iyo xiisadda murqahaaga, waxaad ku hagaajin kartaa tayada noloshaada adoo hela hurdo fiican, la dagaallanka cudurrada iman kara, iyo kobcinta dareenkaaga guud ee ladnaanta.
Kubadaha culeyska fekerka waa aalad weyn maxaa yeelay dhab ahaantii waxay kaa caawinayaan inaad yareyso xiisadda jireed ee jirkaaga ku abuurta nolosha darteed’s walwalka. In kasta oo culeysku yahay jawaab nafsiyan ah oo xaalad ah, haddana wuxuu si muuqata uga muuqdaa jirkaaga, sidaa darteed la dagaallanka astaamahaas muuqaal ahaaneed ayaa qayb muhiim ah ka ah yareynta xiisadda.
Iskuujinta kubadaha isku buuqsan ee walbahaarka ah waxay dhaqaajinayaan gacantaada iyo murqaha curcurada. Kadib, mar alla markii aad sii dayso xajintaada, muruqyadaadu way nasanayaan. Ficilkan soo noqnoqda ee qabashada iyo sii deynta wuxuu yareynayaa murqaha muruqyada waxaana si fudud loogu sameyn karaa miiskaaga adigoon dhibsan ama aan mashquulin qofkasta oo ka shaqeeya hareerahaaga.
Markaad dareento walaacaaga inuu sii kordhayo maalintii, ama haddii aad ku jirto waqti khaas ah, waxaa fiican inaad haysato xoogaa agabyo ah oo ku ciyaaraan buufiska si aad u yareyso dareenadan xun. Dheeraad ah, kubbadaha walaaca ayaa loo isticmaali karaa si looga caawiyo ka hortagga murqaha muruqyada haddii aad dareento inay taasi noqon doonto arrin adiga kugu habboon mustaqbalka dhow.
Kubadaha taxanaha ah
Waxay kaa weecineysaa dareenkaaga.
Markaad diirada u jeediso kubbada walbahaarka, waxaad joojineysaa inaad ka fikirto waxyaabaha kuu keenaya walbahaarka iyo walwalka. Kaliya maahan jirkaaga kan nasashada, laakiin sidoo kale maskaxdaada. Markaad fiiro gaar ah u yeelatid wax walaac leh, waxaad dareemi kartaa in wadnahaagu si dhakhso leh u garaacayo, maskaxdaaduna waxay bilaabaysaa tartan, muruqyadaaguna way kacsan yihiin. In kasta oo ay jiraan siyaabo fara badan oo dareenkaaga looga weeciyo culeyska fekerka, sida jimicsiga ama la hadalka saaxiib, xulashooyinkaan marwalba suurtagal ma ahan xilligan.
Tani waa sababta kubbadaha walaaca badanaa loola xiriiriyo shaqada. Xafiisyadu waa isha aasaasiga ah ee walaaca dad badan, laakiin ma bilaabi kartid inaad filim ka ciyaartid kumbuyuutarkaaga ama wici kartid saaxiibkaaga ugu fiican si aad diiradda u saarto wax kale.
Taabadalkeed, waad iska bixin kartaa kubbadaada walbahaarka oo si adag iskaga tuuji si ay kaaga caawiso inaad diirada saarto neeftaada iyo muruqyadaada si ay kaaga caawiso nasashada jirkaaga. Khubaradu waxay caddeeyeen in ficil-celinta soo noqnoqda ee qabashada iyo sii deynta kubbadda ay la mid tahay saamaynta dejinta ee qofku ka helo ku-dhaqanka iyo fekerka yoga.
Waxay kicineysaa neerfahaaga.
Cadaadiska aad saareyso markaad tuujineyso kubbada walbahaarka ah waxay kicineysaa kicinta neerfaha gacmahaaga oo u sii gudbaya calaamadaha aagga maskaxda ee maskaxdaada, taas oo mas'uul ka ah dareenkaaga iyo shucuurtaada. Kicinta dareemayaasha waxay bixisaa saameyn acupressure, taas oo ah ifafaale meesha kicinta qayb ka mid ah jirkaaga ay saameyn ku yeelaneyso qeybaha kale ee jirkaaga.
Hal dareere gaar ahaan, dareemahaaga siilka, wuxuu kuxiranyahay xubin kasta oo jirkaaga katirsan. Kicinta dareemahan waxay caawineysaa yareynta kacsanaanta, daalka, walwalka, iyo inbadan. Ereyga "vagus" macnihiisu waa "warwareega," oo loola jeedo awoodda neerfaha ee ah inay maskaxdaada ka gaarto mindhiciradaada iyo xubno kale oo badan oo muhiim ah. Waxay abuurtaa wareegga jawaab celinta inta udhaxeysa maskaxda iyo jirka intiisa kale, dirista iyo helitaanka macluumaadka ku saabsan caafimaadkaaga iyo ladnaantaada.
Xirfadlayaashu waxay aamminsan yihiin in xiriir ka dhexeeyo welwelka iyo niyadjabka iyo cilladda neerfaha xubinta taranka. Tani waxay ka dhigan tahay in kicinta dareemahan uu yahay hal dariiqo oo aad suurto gal ugu bari karto jirkaaga inuu nasto. Culimada cilmibaadhista waxay ogaadeen in fekerku uu beddeli karo dhaqdhaqaaqa neerfaha xubinta taranka, iyo sababta oo ah ficil celinta soo noqnoqda ee tuurista iyo sii deynta kubbadda walaaca ayaa ku dayanaysa saamaynta xasilloonida ee aad ka hesho fikirka, tani waxay soo jeedinaysaa in isticmaalka kubbadda walaaca ahi ay kicin karto dareemaha xubinta taranka sidoo kale.
Dareemayaasha gacantaada kujira ayaa sidoo kale kuxiran qaybo kamid ah maskaxdaada oo xukuma shucuurtaada. Kicinta aan kor ku soo sheegnay waxay kicineysaa sii deynta endorfin-hormoonnada aad u baahan tahay inaad dareento walaac la'aan. Tuujinta kubbadda walbahaarka waxay dhiirrigelisaa sii deynta endorfin, kuwaas oo ah hormoonno u dhaqma sidii dajin iyo xanuun baabi'iye. Tani waxay keeneysaa saameyn deggan waxayna kaa caawineysaa hagaajinta niyaddaada.
Dhibaatada yar ee ku haysata noloshaada guud ahaan, sida ugu fiican ee niyaddaadu caadi ahaan ahaan doontaa. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad awoodid inaad si joogto ah ula dagaallanto walwalkaaga adoo si fudud u adeegsanaya kubbadaha lagu daweeyo ee gacmaha, falkan yar ee noloshaada ah wuxuu yeelan karaa saameyn ballaaran, oo xaaqan.
Kubadaha walbahaarka kale
Waxay xoojisaa diiradda iyo feejignaanta
Daraasad cilmi baaris ayaa muujineysa in isticmaalka kubbadaha walaaca ay hagaajin karaan diiradda, feejignaanta, iyo feejignaanta kooxaha ardayda fasalka lixaad. Ardaydu waxay u aaneeyeen feejignaantooda iyo feejignaantooda korodhka dhawr saamayn oo ay ku yeesheen kubbadaha walaaca ahi. Tusaale ahaan, qaar baa soo sheegay inay joojiyeen ku mashquulinta mashquulinta, caadooyinka khiyaanada, sida qaniinida ciddiyaha, markay awoodaan inay isticmaalaan kubadaha walaaca.
Qaar kale waxay xuseen in caadooyinkooda qaarkood (sida cagaha taabashada ama qalimaanta riix) ay joogsan doonaan markay leeyihiin kubbado walaac, taas oo faa'iido u leh kuwa hareerahooda ah maxaa yeelay dhaqammadoodii hore ayaa mashquulinayay.
Ardayda iyo dadka waaweyn ee jecel inay dhaqaaqaan, isticmaalka kubbadda walbahaarka waxay siisaa iyaga dariiq ay ku dhaqaaqaan oo raaxo leh, iyagoon ku lug yeelan dabeecad mashquuliya. Marka, kaliya ma ahan kubbadda walbahaarku inay kordhiso feejignaanta qofka adeegsanaya, laakiin waxay sidoo kale hagaajin kartaa awoodda kuwa ku hareeraysan inay xoogga saaraan hawsha gacanta ku haysa.
Dadka isticmaalay kubbadaha buufiska - oo ay ku jiraan ardayda daraasaddan ku jirta - waxay badanaa ogaadeen inay si wax ku ool ah u leeyihiin xoojinta diiradooda oo ay doonayaan inay sii wadaan inay u isticmaalaan si joogto ah ka dib markay si fudud u tijaabiyaan.
Goobta codsiga kubbadda walbahaarka.
Kubadaha culeyska fekerka kaliya ma ahan kuwa yareeya walwalka. Waxay sidoo kale kaa caawinayaan inaad jimicsato gacmahaaga iyo farahaaga si aad uga fogaato xaaladaha qaarkood sida arthritis iyo carpal tunnel syndrome. Muruqyada gacmahaaga iyo curcuradaada sidoo kale way daciifin karaan waqti ka dib isticmaalka badan, taasoo u horseedaysa xaaladahan. Haddii kale, dhaawacyada ku dhaca kor sare ee gacantaada (sida suxulka oo kale) waxay kuu sababi karaan inaad xaddiddo isticmaalka muruqyada gacantaas ku jira, taasoo kuu horseedi doonta muruq-xanuun. Ugu dambeyntiina, xaaladaha caafimaad qaarkood ama daaweyntu waxay sidoo kale sababi karaan daciifnimo muruqyada, sida fistulas ama kabuubyo ay sabab u tahay daaweynta kemotherabi.
Isku soo uruursiga kubbadda walbahaarka waxay ka caawin kartaa dhaqancelinta muruqyada gacantaada waxayna hagaajineysaa qabashadaada. Way fiicantahay haddii aad kubbada ku calaacasho calaacashaada sida ugu macquulsan ka dibna tartiib tartiib ah u sii daa. Samee seddex qaybood oo ah 10 reps laba jeer maalintii si aad dib ugu hesho xoogaa xoog ah.
Haddii aad u tagaysid dhakhtar ama dabiib dabiici ah dhaawaca gacantaada, waxay kuu soo jeedin karaan inaad ku isticmaasho kubbadaada walbahaarka labada gacmood ama midka dhaawacmay. Qaab kale oo ay dadku u isticmaalaan kubbadaha buuqsan si ay uga bogsadaan dhaawacyada ayaa ah inay miiska saaraan kubbadda oo ay farahaaga ku cadaadiyaan sida ugu adag ee aad u geli karto kubbadda, adoo haya booska 10 ilbidhiqsi ka hor inta aan la sii daynin.
Dhakhaatiirta qaar xitaa waxay soo jeediyaan in bukaanku u adeegsado kubadaha walaaca cagaha faraha iyo cagaha. Tan waxaa lagu samayn karaa adiga oo dhigaya kubbadda dhulka oo suulaya suulashaada, ka dibna ku riixaya kubbadda walaaca kubbadaha cagahaaga.
Hadda oo aad ogtahay faa iidooyinka kubbadaha walaaca, aan eegno sida caruurtan walxaha walaaca ahi u shaqeeyaan ay dhab ahaan u shaqeeyaan.
Sidee Kubbadaha Cadaadisku u shaqeeyaan?
Maskaxdeenu waxay ka kooban tahay laba kanaal: kanaal dareen ah iyo kanaal maskaxeed. Dareenka dareenku waa waxa aan aragno, maqalno, dareemno, dhadhansanno oo urinno, halka indheer-garadku yahay waxa aan u adeegsanno inaan macno uga sameyno waaya-aragnimadeenna xagga dareenka ah.
Hore: Jumbo Tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u leh xanaaqa xanaaqa
Xiga: Qalabaynta gargaarka tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah leh ah "
Galaxy China Panda Squishy oo si tartiib tartiib ah u kordheysa Hotsale ...
Soo saare jaban Eco Friendly oem caadada squi ...
Ciyaaraha Gawaarida Gaaban ee Gawaarida Gawaarida / kubbadaha
Waxyaabaha lagu ciyaaro jilitaanka PU ee Kartuunka qaabka guriga PU auto ...
Waxyaabaha jilicsan ee jilicsan ee tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u ...